သူ့ကို မောင်ချစ်တာ သေချာသွားရင်………….. – PoemsCorner
ချိန်းတိုင်းနောက်ကျတက်တဲ့ မောင့် အကျင့်တွေကို ပြင်ပါ…..။
အမှတ်တမဲ့နိုင်လွန်းတဲ့ မောင့် မှတ်ဥာဏ်တွေကို လေ့ကျင့်ပါ….။
ကတိမတည်တတ်တဲ့ မောင့်စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း ဆုံးမပါ….။
သူပြောထားသမျှ အရာရာကို မောင် မှတ်သားထားပါ…..။
မောင်တို့ အမှတ်တရအားလုံး အစဉ်အမြဲ အလေးထားပါ….။
သူ့လက်ကို မောင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆုပ်ကိုင်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ……။
မောင့်ရဲ့သစ္စာ သူ့တစ်ယောက်တည်းအတွက်သာ ထာဝရတည်ဆောက်သွားပါ………….။
ကျွန်မတို့ရက်စွဲတွေထဲက မောင့်စရိုက်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ပါ….။
အချစ်ဆိုတာ သိသွားတဲ့ ပုံစံသစ်နဲ့ မောင့်ကြောင့် သူ အမြဲပျော်ရွှင်ရအောင် ထားပါ….။
သူစိတ်တိုင်းကျ အမိန့်တွေပေးတိုင်း သဘောကျစွာ မောင် နာခံပါ……….။
ကျွန်မအပေါ် ပြုမိသမျှ မောင့်လုပ်ရပ်တွေ အတွက် နောင်တရပါ….။
၀ဋ်လည်ခြင်းရဲ့ အရသာကို မောင်ခံစားပါ…..။
ကျွန်မတို့ အတိတ်ကို ပြန်အမှတ်ရ…..
ကျွန်မကဲ့သို့ မောင် ရင်ကွဲနာကျဖို့အတွက် မောင် ပြင်ဆင်ထားပါ…………။
In: ကဗျာ Posted By: Angle Date: Mar 30, 2011
Leave comment 28 Comments & 1,144 views
By: genius.jinx28 at Mar 30, 2011
By: yinmon at Apr 3, 2011
By: [email protected] at May 16, 2011
By: နှင်း at Jun 3, 2011
By: အသဲကွဲမိုး at Jun 3, 2011
သူနောင်တရနေမှာပါ…သေချာတယ် “လွမ်း ” သူနောင်တရနေတယ်….။ ။
ကဗျာတွေတိုင်း နင့်ခံစားချက်တွေ ဘယ်လောက် နက်လဲ ဖော်ပြထားပါတယ်…။ ။
By: မြင့်မိုရ် at Jun 13, 2011
တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့လဲ ခံစားချက်ဆိုတာ လုပ်ယူလို့မရဘူး.။အမအနေနဲ့ တကယ်ကြီးကို ထိထိမိမိ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်.။အဲ့လိုဖြစ်တာလဲကောင်းပါတယ်.။ စာသားတွေဖြစ်သွားတာပေါ့.။ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ဖတ်နေရင်း နဲ့ မျက်ရည်ဝဲမိတယ်..’ ကျွန်မကဲ့သို့ မောင် ရင်ကွဲနာကျဖို့အတွက် မောင် ပြင်ဆင်ထားပါ” ကြောက်လို့မဟုတ်ပါဦး…လာတော့မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်.။
By: အထီးကျန်သူ at Jun 13, 2011
By: အလွမ်း at Jun 13, 2011
ဘယ်လိုအဲ့လို ခံစားချက်မျိုးလေးက ကောင်းတာလဲ..။ အထီးကျန်သူဆိုတာ ကျွန်တော်ပါ.။
By: mgnyein at Jun 13, 2011
’ ကျွန်မကဲ့သို့ မောင် ရင်ကွဲနာကျဖို့အတွက် မောင် ပြင်ဆင်ထားပါ” ကြောက်လို့မဟုတ်ပါဦး…လာတော့မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်.။
ဒါမှမဟုတ် ကဗျာထဲမှာ ရေးထားတဲ့လူလို ရက်စက်ခဲ့ဖူးလို့လား….?
တကယ်တော့ ကဗျာထဲမှာရေးထားတဲ့သူက လဲရက်စက်တဲ့သူမဟုတ်သလို ကျွန်တော်ကလဲ ရက်စက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဦး.။ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဆက်လက်မချစ်နိုင်တော့လို့..အကြောင်းတရားတွေမတိုက်ဆိုင်တော့လို့ ..၊ဆက်လက်လက်တွဲနေလဲ ဘ၀တွေ ပြောင်းလဲမူမရှိတော့ လို ရွေးချယ်မူတစ်ခုပါ.။ ဒါကိုရက်စက်တယ်လို့ တော့ပြောမရဘူးထင်တာပဲ.။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမူတိုက်ဆိုင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားမူတစ်ခုဆိုတော့ ခံစားချက်မတူညီရင် တစ်ဘက်ချစ်နေသည့်တိုင် လမ်းခွဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့ထင်တာပဲ..။အဲ့လိုဖြစ်ကျရင်တော့ တစ်ဘက်က ရင်ကွဲသူ .တစ်ဘက်က လမ်းခွဲသူ ဖြစ်မှာပဲလေ.။ဒါကိုရက်စက်တယ်လို့တော့မယူဆသင့်ပါဦး.။ လူဆိုတာ ကလဲ ခက်သားပဲ.ကိုယ်လျှောက်ခဲ့သင့်သော လမ်းကို အချိန်နှောင်းမှ သိတက်ကျတဲ့ အမျိုးဆိုတော့ .နောင်တ ကိုလက်ခံထားရင်တော့ နောင်တ ရနေမှာပဲလေ.။
By: Mg Nyein at Jun 13, 2011
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကဗျာလေးကို အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အသင်္ချေပါ သူငယ်ချင်း….
ဆောရီး အမ ..ကျွန်တော်ပြောတာလိုရင်းလွဲသွားတယ်ထင်တယ်..။ အဲ့ ကွန်မန့်လေး ဖျက်လို့ရရင်ဖျက်လိုက်ပါ.။ အမ စာသားတွေက ကောင်းတော့ ကတုန်ကရင်ဖြစ်သွားလို့ပါ..။ တကယ်ပါ..နားလည်ပေးနော်.။
ဒီကဗျာမှာ ကွန့်မန့်အပြန်အလှန်ပေးထားတာပိုပြီးတော့ အနှစ်သာရဖြစ်သွားသလိုပဲ
ဒီလို မပြောဖြစ်ကြတာကြာပြီထင်တာပဲ ။
ဒါပေမယ့် ကိုငြိမ်းရေ တစ်ဘက်ထဲကကြည့်ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးတို့
By: ခင်ဘုန်းနေ at Jun 13, 2011
သင့်ရင်ထဲမှာ ကျွန်ုပ်မရှိလျှင်…ကျေးဇူးပြုပြီးအလွမ်း မပေးပါနဲ့…တဲ့။
ဆော်ရီးပါ မဆိုင်ပဲဝင်ပြောမိရင် အလွမ်းရေ မိုးကိုခွင့်လွှတ်ပါ
By: အသဲကွဲမိုး at Jun 13, 2011
By: ei lay at Jun 13, 2011
good one again.. i just don’t really like the last part of the poem.
By: aphyu at Aug 18, 2011
ကျွန်မကဲ့သို့ မောင် ရင်ကွဲနာကျဖို့အတွက် မောင် ပြင်ဆင်ထားပါ……
By: su pone at Aug 18, 2011
By: poohmay at Jan 23, 2012
thu ko “mg” chit tar tay char twar yinnnnnnnnnnnnn
kyun ma lo wit ma le par say neeeeeeeeee
By: ei lay at Jan 30, 2012
မှော်ဝင် ကဗျာ အလား
By: ကျော်ထွဋ်လွင် at Jan 30, 2012
By: ကေသရီ at Jan 31, 2012
By: miss thandar at Feb 23, 2012
ငါ……တကယ် ငိုကြွေးမိတယ် ဒီကဗျာလေးဖတ်မိတဲ့ အချိန်တိုင်း…
By: Da at Mar 2, 2012
ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ သူ့ကိုတကယ်ချစ်ရင် ဆိုတာနဲ့တင် ရင်ထဲငြိတယ်
By: moeayeaye at Oct 29, 2012
By: အလွမ်း at Oct 29, 2012
ကဗျာလေးကို အားပေးသွားပါတယ်…….သံသရာတကွေမှာ အချစ်ဆိုတာကို ပြန်တွေခဲတယ် ဆိုရင်
သူချစ်ကိုချစ် နှစ်ဘက်မျှတဲ့ချစ်ခြင်းတွေ ပေါင်းဆုံနိုင်ပါစေလို………….ဆန္ဒပြုရင်……..
By: ကိုချစ်ကို at Oct 29, 2012